Ihe mkpuchi kọmpụta maka ụlọ ọrụ → Ahịa • Ahịa • Onye nrụpụta • P&M onye nkesa
Nye ha maka ụlọ ọrụ
Gịnị mere o ji baa uru isoro anyị rụọ?
Anyị bụ ụlọ ọrụ ọkachamara na ire na nkesa nke mgbasa ozi na uwe ọrụ. Anyị na-enye akara ọ bụghị naanị uwe, kamakwa textiles na-eji usoro ahụ ihe mkpuchi kọmputa na ebipụta ihuenyo.
Debanye aha ụlọ ọrụ gị taa ma nata mbelata mara mma! >>
Ndị ọrụ anyị ruru eru nwere ọtụtụ ahụmịhe afọ ga-enwe obi ụtọ inye aka na ndụmọdụ dị na njirisi na nhọrọ nke usoro akara kachasị mma. Anyị nwere ahụmịhe dị ukwuu na ịkwa akwa, ịkpụ na ịkọpụta maka ụlọ ọrụ mgbasa ozi na ụdị ndị a ma ama.
2. Izu oke
Kemgbe 2003, anyị na-enye ọrụ ịkwa akwa, ịcha, ịkpụcha na akara aha. Anyị nwere ụlọ ịkwa akwa anyị na ogige igwe maka ịcha akwa. Anyị nwere ọtụtụ ngwaahịa - ihe karịrị 6000 ngwaahịa, uwe ọrụ na uwe mgbasa ozi sitere na ndị nrụpụta ama ama na ọnụahịa mara mma. Nwere ike ịzụta ma uwe na ọrụ ịdebanye aha (biko kpọtụrụ anyị tupu oge maka njirisi onwe onye) na weebụsaịtị anyị www.pm.com.pl ma ọ bụ na ụlọ ahịa anyị na Allegro "PRODUCER-BHP".
3. Inye onwe gị
Lọ ịkwa akwa anyị na-ejide n'aka na ngwaahịa ndị anyị mepụtara bụ akwa ndị kachasị mma nwere njiri arụ ọrụ dị oke mma na teknụzụ nhicha na nhicha ọ bụla. Anyị na-enwe ike izute ndị ọrụ ngo kachasị achọsi ike site na iji ngwa ọrụ anyị nwere ike.
Anyị na-agbanwe - anyị na-eme ngwa ngwa maka mkpa ndị ahịa - ma na mmepụta yana ihe gbasara iwu. Anyị na-enye ọrụ nke ịkwa akwa na mbipụta ihuenyo ma na ngwaahịa ndị a zụrụ n'ụlọ ahịa anyị ma nyefee ya n'aka ndị ahịa. Ọzọkwa, site na ịdenye aha na weebụsaịtị anyị, mgbe ị na-azụ ihe, ịnwere ike ịnweta ego ọzọ site na usoro nke abụọ.
5. Tụkwasị obi
Anyị na-abịa n'otu ọ bụla n'otu n'otu, na-enyocha mmejuputa ya n'oge ọ bụla. Anyị na-ewulite ntụkwasị obi anyị na ndị ahịa na ndị ọkachamara na-elekọta ọkachamara.
Ihe omuma komputa - ihe ndi ama ama
Mmepụta ụdị akwa dị iche iche - gụnyere akwa ọkachamara - bụ naanị akụkụ nke ihe anyị na-enye. Dika ntinye aka, ndi ahia anyi na enweta ikike nke iji otutu ndi ozo. Anyị na-arụkwa ọrụ ike dị ka omumu ihe omumu ihe, nke bu otu n’ime ebumnuche anyi kacha elu iji nya isi.
Ihe mkpuchi kọmputa bụ ụzọ dị mma, mara mma ma dịgidere iji mata uwe. N'iji akụrụngwa pụrụ iche, anyị na-enwe ike ịme ihe ọ bụla, ọbụlagodi ụkpụrụ nke nha ọ bụla na uwe ọ bụla. Anyị na-etinye ngwa mkpuchi na ọtụtụ ụdị uwe (uwe elu polo, t-shirts, uwe ọrụ, akpa, njikọ, ịchafụ). Egosighikwa anyị ụdị uwe - ụlọ ọrụ anyị nwere ọkachamara ịkwa akwa na ebe ịkpụcha ihe, yabụ anyị nwere ikike zuru oke maka ụdị ihe anyị na-akwado gị. Ohere ndị a na-enye site na ụlọ ahịa akpa kọmputa bụ nnukwu uru maka ụlọ ọrụ na-ere ahịa ahịa Poland na mgbasa ozi.
Ha tụkwasịrị anyị obi, n'etiti ndị ọzọ:
- Ahịa ugwu
na ọtụtụ ndị ọzọ. More ịhụ na nke anyị ụlọ ahịa. Ọrụ anyị gara aga na-egosi na agbanyeghị oru ngo a, anyị na-enwe ike ịme iwu dabere na oge.
Mbipụta ihuenyo - akara mgbasa ozi
Ọ bụ otu n'ime ụdị akara akara a na-ahọrọkarị, nke anyị nwekwara ike ịnye. Ọ bụghị naanị na ọrụ a na - adịgide adịgide ma na - enye ezigbo ọmarịcha, mana na - egosipụtakwa palette ụcha nke ihe osise ọ bụla. Site na teknụzụ ya dị elu na nkenke ya, anyị na-enwe ike ịnye ndị ahịa anyị ụdị kachasị mma, ma uwe nke onwe ha, yana njiri mara aha ha, ihe osise ma ọ bụ eserese. N'ihi mmezu nke ọrụ anyị, anyị nwere ike na-achịkwa usoro niile nke imepụta okokụre arụmọrụ.
Nweta ọsọsọ bụ ebumnuche anyị
Anyị na-ebugara ndị ahịa niile Poland ihe niile, yana mba ofesi. Anyị na-ebugharị ngwongwo ahụ kachasị site na ntinye aka DPD. Maka iwu buru ibu, na arịrịọ onye ahịa anyị, anyị na-ahazi ụgbọ njem na ebe nkwakọba ihe. Site n'inye iwu mgbe niile, anyị na-enwe ike ikwenyere ọnụ ahịa dị oke ọnụ ahịa. Enwere ike ịnakọta nkeonwe n'isi ụlọ ọrụ anyị na Rawa Mazowiecka.